Miyaad i tusi kartaa habka saxda ah ee aad ku heli kartid PR10 backlinks lacag la'aan?
Tani waa su'aasha saxda ah maxaa yeelay waxaa la aqbalaa in xiriirada la leh hay'adda ugu sareysa ee domainka iyo qiimaha PageRank (sida PR5 - PR10 backlinks) kaliya ayaa la shaqeyn karaa halkii laga iibsan lahaa. Haa, dabcan, waxaa jira waxyaabo badan oo kala duwan oo lagu arkay guud ahaan Webka, noocyo kala duwan oo xiriir ah, xitaa xitaa PR10 backlinks ayaa si sahlan looga heli karaa iibka. Si kastaba ha ahaatee, waa 99. 9% kiisaska, kuwan "dalabyo" waa wax aan xirfad ahayn oo ay isticmaalaan shaandhada si ay u helaan faa'iido. Ma rabtid in aad boggaaga ama blog-kaaga aad ku rido ciqaab aad u culus oo aad u haysatid dib-u-celin lacag-bixineed oo tayo hoose leh, miyaad tahay? Xusuusnow, marka ay timaaddo dhismaha xiriirka wanaagsan ee SEO - tayada marwalba waa arrin, ma aha tiro. Waxaan loola jeedaa in ay haystaan ​​laba ka mid ah PR10 backlinks, sida tusaale ahaan bogagga waxbarashada iyo kuwa dawlada ama ilaha kale ee la isku halleyn karo marwalba waxay u fiican tahay ujeedooyinka SEO, halkii ay ku dhufan lahaayeen baaxada qiyaasta hoose ee tayada hoose, marka laga reebo iyada oo aan si cad loo fahmin himilada ugu muhiimsan iyo shaqadooda dhabta ah. Halkan waxaa ah sida aad u heli karto xiriirro dheeraad ah oo loogu talagalay SEO, iyo xitaa PR 10 backlinks - dabcan, waxaa jira dhowr habab oo qurux badan oo kaa caawin kara taas. Ka mid ah kuwa kale, waxaan ku talinaynaa isku day tijaabooyinka, Fikradaha, Soo-jeedinta, Warqadaha martida, iyo Infographics. Hase yeeshee, waxa weeye in dib-u-celinta PR10 dib looga soo qaadan karo dawladaha, ama ilaha waxbarashada kaliya. Sannadkan waxaan mar hore ku guuleystay in la helo qaar ka mid ah xiriirada qiimaha dheeraadka ah gaar ahaan kuwa ugu dambeeya - waxaad kaloo isku dayi kartaa inaad kasbato PR8-PR10 backlinks oo laga helo bogaga internetka ee EDU - adoo samaynaya ballac, ama adoo isticmaalaya deeqaha waxbarasho.
Ugu badnaan, aasaas waxbarasho oo macquul ah, oo aan ku koobnayn jaamacadaha iyo kulliyadaha, ma aha oo kaliya in ay ka shaqeeyaan bogga rasmiga ah, laakiin badanaa way kala duwan yihiin bogagga kheyraadka leh xiriiro badan oo tilmaamaya ilaha ugu muhiimsan ee waxtar u leh dhammaan - labadiinaba, iyo macallimiintooda. Taasina waa sababta ay u shaqeyneyso si joogta ah oo loo ogaado bogagga kheyraadka ee mustaqbalka ee mustaqbalka waxay noqon kartaa hab weyn oo laga yaabo in laga yaabo inay noqoto taageerada ugu qaalisan adoon bixinin dollar, ugu yaraan. Waxaan kugula talineynaa in aad wax qabad ballaadhan ka heshid email ahaan si aad u bixiso xalal wax ku ool ah oo la xidhiidha warshadahaaga, tusaale ahaan, naqshadda webka, cilmi baarista, iwm. Dabcan, waxaad u eegi doontaa sida spam. Hase yeeshee, helitaanka xitaa 5-10% jawaabaha habboon ee kuugu soo diri karo xiriiriyahaada farsamadani waxay u noqoneysaa mid macquul ah, mid sax ah?
Nidaamkani uma baahna kaliya wakhtiga iyo dadaalkaaga laakiin qiyaas cayiman oo kharashka. Waxay ku lug leedahay abuurista iyo kor u qaadida deeqda waxbarasho si ay u hesho dib-u-celinta EDU. Haddii aad diyaar u tahay in aad ka shaqeyso deeq waxbarasho oo aad u culus, waxaa halkan ku jira saddex qodob oo muhiim ah oo la xariira hawlaha:
Samee bog si aad u bixiso sharaxaadda guud ee deeqda waxbarasho, - foomka codsiga si aad uga qayb qaadato ka-qaybgalayaasha ku habboon.
Aqoonsiga jaamacadaha ama kulliyadaha mustaqbalka isticmaalaya "search scholarship" oo lagu qaato ereyga muhiimka ah.
Dhamaystiraad u samee e-mail nadiif ah - oo aad xor u tahay inaad soo degto oo aad bilowdid inaad shaqayso si aad u abuurto deeq waxbarasho oo dhab ah oo abaalmarin iyo abaalmarin dhab ah Source .